Doorka HomePod iyo AirPods Max ee Apple Music cusub | Wararka IPhone
Luis Padilla | | Qalabka IPhone, HomePod
Apple waxay ku dhawaaqday wax ka yar 24 saacadood kahor tayada cusub ee Apple Music, oo leh codka Dolby Atmos oo aan lahayn tayo lumis, xitaa iyada oo leh ikhtiyaar Go'aan Sare. Door intee le'eg ayay ku hadlayaan sameecadahaaga iyo sameecadaha dhagaha adeeggan cusub?
Apple Music ayaa na siin doonta, laga bilaabo bisha Juun, suurtagalnimada dhageysiga muusikada iyada oo aan lumin, waxa loo yaqaan "maqal la'aan maqal", qaab u baahan ballaadhin dheeri ah, keyd badan laakiin beddelkeeda waxay na siineysaa tayo sare. Xitaa waxaan heli doonnaa ikhtiyaarka "Go'aanka Sare", oo noqon doona qaab ixtiraami doona muusikada sida loogu duubay istuudiyaha, iyada oo aan wax cadaadis ah la saarin. Waxay sidoo kale kobcin doontaa khibrada dhageysiga iyadoo la adeegsanayo dhawaq badan oo Dolby Atmos ah. Waxaan ka dhagaysan karnaa muusikadan iPhone-ka, iPad-ka, Apple TV-ga iyo Mac-ga, laakiin sidee buu dhagahayagu u soo gaarayaa Door noocee ah ayaa AirPods iyo HomePod iyo HomePod Mini ciyaari doonaan?
1 HomePod iyo HomePod mini
2 AirPods, AirPods Pro, iyo AirPods Max
3 Adeeg cusub oo aan qalab u lahayn isaga
4 Sideen u dhagaysan doonnaa muusikada Go'aanka Sare?
HomePod iyo HomePod mini
Dadka ku hadla Apple waxay leeyihiin tayo cod shaki la'aan shaki ah, haa, midkastoo qaybtiisa ah. Apple ayaa tirtiray HomePod dhawr toddobaad ka hor, isaga oo aan ku dhawaaqin beddelkiisa, iyo HomePod mini ayaa ah iibiyaha ugu sarreeya qiimihiisa ugu fiican ee lacagta. Qaar badan oo ka mid ah milkiilayaasha qalabkan ayaa u dulqaatay sii deynta muusig tayo sare leh oo ku saabsan Apple Music, si aan uga dhigno HomePodskeena mid ka fiican sida ay maanta yihiin, laakiin xaqiiqadu waxay tahay inaan kala bar noqoneyno.
Labada HomePod iyo HomePod mini waxay ku habboon yihiin codka Dolby Atmos. Haddii aan mar hore ku raaxeysanay cod weyn qolkeena, gaar ahaan markaan isku dhajinay labo HomePods isla markaana aan abuurnay labo istuudiyo, haddaba iyadoo Dolby Atmos laga dhawaajinayo waayo aragnimada dhawaaqa ayaa aad uga wanaagsanaan doonta. Laakiin muusikada haddii tayada luminta ay tahay arrin kale, maxaa yeelay HomePod iyo HomePod mini ma ciyaari karaan.
Apple waxay xaqiijisay in dadka ku hadla ay la jaan qaadi doonin Apple Music Lossless, taasi waa, waa inaan sii wadnaa dhageysiga muusikada qaab isku duuban, sidii hore. Ujeeddooyinka? Annagu garan mayno iyaga xilligan. Waxay umuuqataa inay adagtahay in laga fikiro in "weyn" HomePod uusan awood u lahayn inuu ku soo saaro muusikadaas qalabka kombuyuutarka, haddayna tahay dhibaato xagga software-ka ah waxaa lagu xallin karaa cusbooneysiin. Waxaa laga yaabaa in processor-ka HomePod uu aad ugu taariikheeyay muusikada HiFi? Hagaag, uguyaraan waan ku ciyaari karaa tayada CD-ga, wax waa wax. xaqiiqadu waxay tahay jawaabta Apple waxay noqotay mid cad oo kooban: iyagu isma waafaqsana.
AirPods, AirPods Pro, iyo AirPods Max
Iyada oo leh sameecadaha dhagaha ee Apple waxay lamid tahay sida HomePods. Dhamaan AirPods iyo qaar ka mid ah sameecadaha maqalka ee Beats ayaa taageeri doona Dolby Atmos iyo codka goobta, waxa kaliya ee looga baahan yahay ayaa ah inay heystaan ​​processor-ka H1 ama W1, oo horey loogu soo daray jiilalkii ugu dambeeyay ee sameecadaha dhagaha. Laakiin markaan ka hadlayno dhawaaq aan khasaaro lahayn, iyaguna ciyaarta way ka maqan yihiin.
Waxay ahayd wax aan ka filaynay AirPods iyo AirPods Pro, maaddaama Bluetooth uusan soo gudbin karin dhawaaqa lumis la'aan, laakiin AirPods Max waxay leeyihiin ikhtiyaar ah in lagu isticmaalo fiilada, waxaana jiray rajo dad badan. Tufaaxa Apple wuxuu mar kale nagu tuuray weel biyo qabow isagoo xaqiijinaya in farsamo ahaan aysan suurta gal ahayn, xaddidnaanta isku xirnaanta hillaaca ee sameecadaha dhagaha.
Adeeg cusub oo aan qalab u lahayn isaga
Sidaa darteed waxaa jira xaalad xiiso leh oo ah Apple waxay soo saartay adeeg "badalaya muusigga waligiis" iyada oo aan isticmaaleyaasha Apple awoodin inay si buuxda ugu raaxaystaan. Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku raaxeysanno codka Dolby Atmos, laakiin ma lihin hab aan ugu raaxeysanno dhawaaq aan khasaaro lahayn, oo leh koodhka cusub ee ALAC, ee ku hadla kasta oo ku hadla Apple ama headphone. Xaqiiqdii waa, in la yiraahdo ugu yaraan, arrin jahwareer leh.
Taasi waxay dhaceysaa kama dhigeyso HomePodskeena ama AirPodskeena mid sii xumaanaya. Haddii aad ku faraxsanayd iyaga, waad sii wadi doontaa inaad sidaasoo kale u faraxsanaato ama xitaa ka sii badan tahay, taas oo ay ugu mahadnaqayso Dolby Atmos oo aanad hore u lahayn oo hadda aad tahay, iyo waliba isla qiimahan. Waa wax lagu qoslo in shalay aad moodeysay in AirPods-kaaga Max ay ahaayeen kuwa ugu xun, maantana aad si lama filaan ah ugu soo baraarugtay inaad u aragto inay qashin yihiin. Laakiin wali waa wax lala yaabo xaalada in dhagaha dhagaha in kabadan € 600 aysan awood u laheyn inay ciyaaraan muusikada ugu fiican Apple Music, ama ugu yaraan muusikada labaad ee ugu fiican
Sideen u dhagaysan doonnaa muusikada Go'aanka Sare?
Apple waxay ku dhawaaqday adeegeeda cusub, waxay noo sheegtay aaladaha la jaan qaadi kara iyo kuwa aan u qalmin ... laakiin waxa aan noo sheegin waa sida aan u dhagaysan doonno muusikada iyada oo aan tayada la lumin. Waxaan lahaan doonnaa 20 milyan oo hees ah bilowga, 75 milyan dhamaadka sanadka ... laakiin sidee ayaan u dhagaysanaa iyaga?. Iyadoo aan lahayn isku xiraha Jack-ka ee iPad-ka iyo iPhone-ka, iyo iyadoo AirPods iyo HomePod ay ka maqnaanayaan ciyaarta, dareenka ayaa ah inay na barteen nacnac aynaan cuni karin. Waa inaan sugnaa inta Apple ay na siineyso macluumaad dheeri ah, kadib markii aan weli la bilaabin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » HomePod » HomePod iyo AirPods Max Doorkooda Muusikada Apple ee Tayada Sare leh
Kani waa kumbuyuutarka cusub ee cad ee iPad Pro 2021